Fahafahana mamokatra - Beijing Grip Pipe Technology Co., Ltd.
Momba ny fahaizantsika mamokatra
Beijing Grip Pipe Tech Company voafetra dia manana fahaizan'ny famokarana matanjaka, ny orinasa dia mizara ho ekipa mpamokatra 8: fanodinana vy, fanodinana mekanika, fanodinana bobongolo, famokarana fingotra, famokarana fitaovana mekanika sy elektrika tsy misy fenitra, fivorian'ny vokatra, famafana vokatra ary vokatra fanandramana sy ny hafa.
Vondron'ny fanodinana vy: Sheet Beijing dia manana, manomboka amin'ny 20t ka hatramin'ny 250t, ny karazan-damba fanapahana lovia fametahana fitaovana rehetra, fitaovana hiondrika sns.
Ekipa mpamaingina: i Beijing Grip dia manana ivon-toerana milina avo lenta, ny savaivony fihodinana ambony indrindra dia 900mm, ary orinasa mpamokatra fiaraha-miasa ivelany matanjaka.
Ekipa fanodinana bobongolo: tompon'andraikitra amin'ny famolavolana sy famokarana karazan-javamaniry vita amin'ny metaly sy bobongolo vita amin'ny fingotra;
Ekipa mpamokatra fingotra: mamokatra karazana tombo-kase avo lenta, toy ny NBR, EPDM, silica gel, viton / FKM, sns
Ekipa mpamokatra fitaovana mekanika sy herinaratra tsy mahazatra: tompon'andraikitra indrindra amin'ny R&D sy famokarana fitaovana mekanika sy herinaratra miaraka amin'ny fepetra takiana manokana izay tsy dia ampiasaina matetika eny an-tsena;
Ekipa fivorian'ny vokatra: tompon'andraikitra amin'ny fivorian'ny fantson-tsolika sy mpampitohy fantsona isan-karazany;
Ekipa fanamafisam-peo: Beijing Grip dia manana fitaovana vy fantsona matevina maromaro, ao anatin'izany ny milina fantsom-pandrefesana avo lenta, milina fantson-tseranana fitehirizana angovo ary milina fantsom-panafody AC, tompon'andraikitra amin'ny fizotran'ny vokatra;
Ekipa fitsapana: manana fitaovam-pitsapana faneriterena rehetra i Beijing Grip, fitaovana fitsapana hovitrovitra, fitaovam-pitsapana fitiliana, izay ampiasaina amin'ny fitsapana vokatra tsy ara-dalàna sy ny fizahana kalitaon'ny vokatra isan'andro.